Depụta beta nke mbụ nke Trident OS n'iji Linux Kernel | Site na Linux
Depụta beta nke mbụ nke Trident OS n'iji Linux Kernel
N’ọnwa Ọktọba nke afọ gara aga anyị kesara ebe a na blog ozi banyere mkpebi ahụ a isi mgbanwe site Trident OS mmepe nke bụ sistemụ dabere na BSD mana ndị mmepe họọrọ ka ha gbanwee na kernel Linux.
Emebere Trident na teknụzụ FreeBSD na TrueOS, E wezụga nke ahụ na-eji usoro faịlụ ZFS na usoro nnabata OpenRC. Ihe oru ngo a tọrọ ntọala site n'aka ndị mmepe metụtara ịrụ ọrụ na TrueOS ma tinye ya dị ka ọrụ dị n'akụkụ ya (TrueOS bụ ikpo okwu maka ịmepụta nkesa na Trident bụ nkesa dabere na ikpo okwu a maka ndị ọrụ njedebe).
Cheta na ad nke oru Trident banyere Mbugharị oru ngo na Linux ihe mere site na enweghi ike iwepu ufodu nsogbu na-egbochi ndi oru nkesa, dịka ndakọrịta ngwaike, nkwado maka ụkpụrụ nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ, yana nnweta ngwugwu.
Ndị mmepe Trident OS ga-akwaga sistemụ site na BSD ruo Linux
Mgbe iwere ihe dị iche iche achọrọ iji họrọ isi nke na-ezute ha, Void Linux bụ onye were ya dị ka ntọala maka Mbugharị.
A na-atụ anya na mgbe ịgbanwee Void Linux na Trident Enwere ike ịgbasa nkwado maka kaadị eserese ma nye ndị ọrụ ọkwọ ụgbọala ọhụụ kachasị ọhụrụ, yana ịkwalite nkwado maka kaadị ụda, ụda gụgharia, ịgbakwunye nkwado maka iyi egwu na-ebugharị site na HDMI, na ịkwalite nkwado maka ihe nkwụnye ntanetị na ntanetị na ngwaọrụ nwere interface Bluetooth, na-enye ụdị nke mmemme ọhụrụ, na-eme ka usoro nbudata ahụ dị ngwa ma na-etinye nkwado maka nrụnye ngwakọ na sistemụ UEFI.
Emepụtara Linux mbụ nke ezi OS
Ugbu a, mgbe ọ fọrọ nke nta ọnwa 3 nke akụkọ mbụ beta ézila nke Trident operating system nke Ọ dị ugbu a maka nbudata ma nwalee ya. Betadị beta a si na FreeBSD na TrueOS kwaga na ntọala nke ngwugwu Void Linux.
Hà nke bootable iso oyiyi bụ 515 MB ọ dịkwa mkpa ikwu na usoro mkpokọta jiri ZFS na mgbọrọgwụ nkebi, enwere ike weghachite ọnọdụ buut site na iji ZFS snapshots tinyere ihe nrụnye dị mfe enyere nke nwere ike ịrụ ọrụ na sistemụ nwere EFI na BIOS.
Ọzọkwa ọ kwuru na ọ ga-ekwe omume iji zoro ezo nkebi nke izo ya ezo, a na-enye nhọrọ ngwugwu maka ọkọlọtọ glibc na ụlọ akwụkwọ musl, maka onye ọrụ ọ bụla iche ZFS dataset ka emepụtara maka ndekọ ụlọ (nwere ike ịmegharị snapshots nke ndekọ ụlọ na-enweghị ịnweta ikike mgbọrọgwụ), a na-enye nzuzo data na ndekọ aha onye ọrụ.
Se enye otutu etoju nke nwụnye: Void (ihe nchịkọta nke ihe efu na ngwugwu maka ndozi ZFS), Server (na-arụ ọrụ na ọnọdụ njikwa maka sava), Lite Desktop (obere desktọọpụ dabere na Lumina), Desktọpụ zuru ezu (desktọọpụ zuru ezu dabere na Lumina na ngwa ọrụ ndị ọzọ, nkwukọrịta) na igwe okwu).
N'ikpeazụ ọ dịkwa mkpa ikwu nke mmachi achoputara nke beta, GUI adịghị njikere ịhazi desktọọpụ, a naghị ebute ngwa ọrụ Trident, na onye nrụnye enweghị usoro nkewa ntuziaka.
Maka ndị bụ ndị ọrụ Trident BSD, ha kwesịrị ịma na ịkwaga na sistemu ọhụrụ anaghị atụ aro ya ebe ọ ka bụ beta ma nwee ọtụtụ chinchi iji dozie, mana mgbe mbipute kwụsiri ike dị, ọ ga-achọ nnyefe akwụkwọ ntuziaka nke ọdịnaya site na / nkebi ụlọ.
Nkwado maka BSD ga-akwụsị ozugbo ewepụtara mbipụta ọhụrụ ahụ na ngwugwu ngwugwu kwụsiri ike nke dabere na FreeBSD 12 ka ewepụrụ na Eprel 2020 (nyocha nnwale dabere na FreeBSD 13-Ugbu a ga-ewepụ na Jenụwarị).
Enwere ike ibudata nbudata nke onyonyo ISO nke ụdị beta a njikọ na-esonụ. Enwere ike ịdekọ ihe oyiyi ahụ na Etcher, nke bụ ngwaọrụ multiplatform.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Depụta beta nke mbụ nke Trident OS n'iji Linux Kernel
Versiondị Firefox 72 nke ọhụụ biara na nhichapụ nke data telemetry na ndị ọzọ
OpenCV ọbá akwụkwọ maka mmata ihe na onyonyo na ese foto